Presnel Kimpembe Oo La Hadlay Warbaahinta Muxuu Ka Yidhi Guushii Xalay Iyo Farxadii Uu Dareemay Bacda Guushii Xalay? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Paris Saint-Germain ayaa u dhaqaaqday inay jebiso rajadii ay ka laheyd Champions League ee Borussia Dortmund ka dib markii ay ka careysiiyeen jawaabta warbaahinta bulshada ee kooxda Jarmalka ka dib guushii lugta hore, sida uu shaaca ka qaaday Presnel Kimpembe.
Guushii 2-1 ee Jarmalka ka dhacday ayaa Dortmund ka faa iideysatay ka hor kulanka Arbacada 90ka daqiiqo ee labaad, halka goolal ay kala dhaliyeen Neymar iyo Juan Bernat ay PSG guusha 2-0 ah iyo wadar ahaan wadar ahaan 3-2 ku gaareen.
Daafaca Faransiiska Kimpembe ayaa sheegay in PSG ay dareentay nimco la’aan sida ay Dortmund ugu dabaaldegeen guushoodii 18kii Febraayo, taasoo uu Erling Haaland dhaliyay labo gool.
“Waa ciyaartoy waa weyn, laakiin waa inaan Nidhaahnaa waxay waayeen sharaftooda” ayuu Kimpembe u sheegay suxufiyiinta.
“Sababtoo ah, ka dib markay ku guuleysteen guriga, waxay sameeyeen tweets aad u tiro badan, qoraallo badan oo Instagram ah, ereyo badan, waxyaabo badan iyo tan. Mawqifkeenna waan wada aragnay, taas ayaanu maskaxda ku haynay, waxaanna u malaynayaa inay dhammaantood na siisay dhiirrigelin wanaagsan Waxay ina siisay caradaan yar Waxayna ka shaqeysay anaga”
Kimpembe wuxuu sheegay in ciyaartooyda guryuhu ay aad ugu farxeen markay arkeen kumanaan taageerayaal ah oo u qulqulaya fagaaraha Parc des Princes ka dib markii xayiraada coronavirus ay la micno tahay in lugta labaad lagu ciyaaray albaabada xiran.
Isku soo wada duuboo taageerayaasha PSG banaanka garoonka ayaa yimid in kasta oo walaac laga muujinayay isu imaatinno waaweyni iyo suurtagalnimada in virusku ku faafo xiriir dhow.
Si kastaba ha noqotee, ciyaartoyda PSG uma muuqan inay maskaxda ku hayaan jiritaankooda waxayna yiraahdeen markii ay arkeen taageerayaasha mar horeba garoonka ka hor intuusan bilaabin ciyaarta waxay kooxda gelisay niyad wanaagsan.
“Waqti xaadirkan, ha ahaadeen shaqaalaha ama ciyaartoydaba, waxaan dhamaanteen ogaannay inaan ciyaarno ciyaar waali ah,” ayuu yiri Kimpembe. “Oo [waan ogaynay] inaan ku qasbanaano inaan nafteena dhiibno sababtoo ah taageerayaasha ayaa ku jiray jilibka, way naga dambeeyeen, in kasta oo xidhniinka la xidhay.”
Ciyaartoyda kooxda PSG ayaa markii dambe dabaaldegay iyagoo ka muuqday balakoon garoonka dhexdiisa ah isla markaana la wadaagaya farxaddooda taageerayaasha hoosta ku jira, maadaama ololkii la joojiyay.
Kubadsameeyaha Angel Di Maria waxaa lagu sawiray isagoo taagan isagoo feeraysan oo gidaarka balakoonka leh.
“Waxaan dareensanahay joogitaankooda kahor imaatinka garoonka,” ayuu yiri Kimpembe. Waxay qaadatay shan, lix daqiiqo, dhamaanteen waxaan helnay taleefannadeenna si aan filim uga dhigno taas. Waa daqiiqad ku dhex dhici doonta qalbiyadeena iyo xusuustayada.
Waxaan dooneynaa inaan dhahno waad mahadsan tihiin iyaga, maxaa yeelay muhim ayey noo aheyd anagana sidoo kale muhiim ayey u aheyd iyaga gaar ahaan iyaga.
Maanta, waxaan u qalmanahay, aqoontuna sidoo kale iyagaa u ah iyaga, sababtoo ah waxay nagu riixeen ciyaarta oo dhan, xitaa hadii ay ka baxsanaayeen Parc des Princes.
“Dhamaanteen waan dhameysanay daal, laakiin aniga oo og inaan waqti yar la qaadan karno taageerayaasheena, aad ayaan u faraxsanahay.
Waxaan dhamaanteen ku orodnay inaan aadno oo aan aragno, aadna waan u faraxsanahay. Waxay naga farxinaysaa qalbiyadeena si aan u aragno jawi noocaas oo kale ah, dareen buuxa leh, dadku qaylinayaan, waana inaan kaliya uga mahadcelin karnaa.
PSG ayaa gaadhay wareega 8da markii ugu horeysay tan iyo 2016, markaasi oo ay guuldarro ka soo gaadhay kooxdaasi oo ay ku garaaceen Manchester City.